Tips & Tricks Archives — Page3of5— Anycall Mobile
Xiaomi ဖုန်းတွေ Android 11 တင်ပြီးမှ Google Maps သုံးလို့အဆင်မပြေခဲ့ရင်?
လက်ရှိမှာ Android 11 ကလည်း တစ်ချို့ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ ရနေပြီဆိုတော့ သူ့ထက်ငါ အရင်ဦးအောင် တင်ချင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုတင်တဲ့အခါမှာ Error အချို့တော့ ရှိနေပါတယ်။ ဒီထဲကမှ Android 11 တင်ပြီးမှ Google…
Xiaomi China (Stable) ဖုန်းတွေမှာ Video Incoming Call ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
Xiaomi China (Stable) အလုံးတွေမှာ Video Wallpaper ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဖုန်းဝင်လာရင် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Video တွေကို Incoming Call အနေနဲ့ပြပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Video တွေ ထားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနည်းလေးအတိုင်း…
Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ MIUI 12 တင်ပြီး Screen Recorder ပျောက်သွားခဲ့ရင် ??
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ခုလက်ရှိ Page မှာရော ဆိုင်မှာပါ အမေးများနေတဲ့ မေးခွန်းလေးရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ “MIUI 12 တင်ပြီးနောက်ပိုင်း Screen Recorder မပါတော့ဘူး၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ အရင်လို Control Center မှာ…
Xiaomi Global အလုံးတွေမှာ Dual Apps တွေ သုံးမရရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ?
ခုနောက်ပိုင်း အချို့ Global အလုံးတွေရဲ့ Setting ထဲမှာ Dual Application ဆိုပြီး တစ်ခါတည်း ပါမလာတော့ပါဘူး။ ဒီ Dual Apps က ဘယ်မော်ဒယ်တွေမှာ အဖြစ်များလဲ ဆိုရင်တော့ အထူးသဖြင့် Redmi 9A…
Xiaomi China (Stable) အလုံးတွေအတွက် Browser ထဲက တရုတ်စာတွေကို ဘယ်လိုပိတ်မလဲ? (သို့မဟုတ်) Google Browser ကို ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ?
Xiaomi, Redmi China (Stable) အလုံးတွေမှာ Browser ထဲ ဝင်လိုက်ရင် တရုတ်စာတွေကို အရင်ဆုံး မြင်တွေ့ရတာက တော်တော်လေး အဆင်မပြေဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ Brower ထဲက မျက်စိရှုပ်စေတဲ့ တရုတ်စာတွေကို ဘယ်လိုပိတ်မလဲ ဒါမှမဟုတ်…
MIUI 11 မှာ ကတည်းက ပါလာတဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့ ဒီ Transparent Wallpaper feature လေးကို သုံးပြီးသွားပြီလား? မသုံးရသေးရင်တော့ စမ်းသုံးကြည့်လိုက်ပါဦး။ ဒီ Feature လေးကတော့ Xiaomi ရဲ့Global Version…
လက်ရှိမှာတော့ Xiaomi User တွေအတွက် အသိချင်ဆုံးအအရာက နှစ်ခုရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တစ်ခုက ကိုယ်ကိုင်ထားတဲ့ Xiaomi ဖုန်းလေးက Android 11 ရမှာလား ဆိုတာရယ် နောက်တစ်ခုကတော့ MIUI 13 Update ပေးရင်…
iOS 14 မှာ ကိုယ်သိချင်တဲ့ သီချင်းတွေကို အသံကြားရုံနဲ့ အမြန်ဆုံး ရှာပေးမယ့် Shazam App
Facebook တို့ TikTok တို့မှာ Music Video လေး တစ်ပိုင်းတစ်စတွေ့လိုက်လို့ သဘောကျသွားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါနဲ့ ကိုယ်က အဲ့သီးချင်းလေး အစအဆုံး လိုချင်တယ်ဆိုရင်‌ ဘယ်လိုရှာမလဲ? အရင်လို Comment မှာ “Song Name…
iOS Devices တွေမှာ Zawgi နဲ့ မှတ်ထားတဲ့ Contact တွေကို အလွယ်ကူဆုံး Unicode ပြောင်းနည်း
ဒီနေ့မှာတော့ Zawgi နဲ့ မှတ်ထားတဲ့ Contact တွေကို Unicode ပြောင်းချင်တဲ့ iOS User တွေအတွက် TTKeyboard ကို အသုံးပြုပြီးတော့ Unicode ပြောင်းလေးကို မျှဝေပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ကတော့ Pyaung…
Xiaomi China Stable အလုံးတွေအတွက် Mi Video နဲ့ Music ထဲက တရုတ်စာတွေကို မပေါ်စေချင်ဘူးဆိုရင်
ဒီနေ့မှာတော့ Xiaomi China Stable အလုံးတွေအတွက် Mi Video နဲ့ Music ထဲက တရုတ်စာတွေ မပေါ်စေချင်ရင် ပိတ်လို့ရတဲ့နည်းလေးကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mi Video ထဲက တရုတ်စာဖျောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ ပထမဆုံး Mi…
iPhone တွေမှာ Jailbreak လုပ်စရာမလိုဘဲ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ iCon ပြောင်းနည်း
ဒီနေ့မှာတော့ iOS User တွေအတွက် ဖုန်းကို Jailbreak လုပ်စရာမလိုဘဲ iCon ပြောင်းနည်းလေးကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး Shortcuts ထဲက အပေါင်းလေး (+) ကို နှိပ်မယ်။ ပြီးရင် Add…
Messenger မှာ ကိုယ့်ဆီပို့ထားတဲ့ စာကို Seen မပြဘဲ ဘယ်လိုဖတ်မလဲ?
ဒီနည်းလေးကတော့ အရမ်းလည်းလွယ်ကူသလို တော်တော်များများလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ အကျိုးရှိအဆင်ပြေစေမှာပါ။ Messenger မှာ ကိုယ့်ဆီပို့ထားတဲ့ စာကို Seen မပြဘဲဖတ်ဖို့ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဆီစာဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံး အင်တာနက်လိုင်းကို အရင်ပိတ်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ့်ဖတ်ချင်တဲ့ Conversation…
iOS Version Update ကို Wifi မသုံးဘဲ Mobile Data နဲ့ Download ဆွဲမယ်
Apple ဟာ iOS Version Update ပေးရင် Mobile Data နဲ့ လုပ်ခွင့်မပေးထားဘဲ Wifi Only နဲ့ပဲ Update လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ နယ်ကမလို့၊ Wifi နဲ့က အဆင်မပြေလို့၊…
Messenger မှာ ဖျက်သွားတဲ့ Removed Message တွေကို ဘယ်လိုပြန်ကြည့်မလဲ?
Messenger မှာ စာပို့ထားပြီးမှ ပြန်ဖျက်သွားလို့ မကြည့်လိုက်တဲ့ အခိုက်အတန့်ကိုတော့ လူတိုင်းကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလို Romove လုပ်သွားတဲ့ စာတွေကို ပြန်ကြည့်ချင်တယ် ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေး ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ Unseen Messenger ဆိုတဲ့ Application…
iOS 14 မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ဓါတ်ပုံ Hide မယ်
ဒီနေ့မှာတော့ iOS 14 တင်ထားတဲ့ Apple User တွေအတွက် Third Party Software ဓါတ်ပုံတွေ သုံးစရာမလိုဘဲ ဓါတ်ပုံအလွယ်တကူ Hide လို့ရတဲ့နည်းလေးကို ပြောပြပေးသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ညာဘက်အောက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ မြှားပြထားတဲ့…